Cabdifataax Xasan Maxamed (Barawaani) – Majaladda
Cabdifataax Xasan Maxamed (Barawaani), waa qoraa iyo cilmi-baadhe. Waxa uu wax ka qoraa arrimaha siyaasadda, amniga, arrimaha bulshada, taariikhda iyo afka. Waxa uu wax ka bartaa dalka Ugaandha (Kambaalla), gaar ahaan kulliyadda diblomaasiyadda iyo xidhiidhika caalamiga ah. Waa maamulaha iyo tifaftiraha guud ee mareegta Indheergarad. Waxa kale oo uu ka mid yahay qorayaasha majalladda Somalism.
Leave a Comment	/ 2021 / By Cabdifataax Xasan Maxamed (Barawaani)
Hordhac Muddo badan, aad u badan, gaar ahaan soddonkii sannadood ee u dambeeyay oo ay soo lammaaniso soddonkii ka horreeyay, Soomaaliya waxa ay la daaladhacaysay helitaan la?aanta, hanasho la?aanta iyo in aysan jirin cid buuxisa kaalinta hoggaamineed ee waddanka lagu dhigi lahaa meesha ku habboon, wax lagaga beddeli lahaa ama lagaga samatabixin lahaa dhibta iyo …
Soomaaliya kadib Carta: Kaalinta Maqan ee Hoggaamineed Read More »